‘महासचिवज्यूले ललितनिवासको जग्‍गा किन्‍नुभाे, ठगिनुभो’ र ठग्ने को ? – www.agnijwala.com
‘महासचिवज्यूले ललितनिवासको जग्‍गा किन्‍नुभाे, ठगिनुभो’ र ठग्ने को ?
काठमाडौं – सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बालुवाटारस्थित ललित निवासको जग्गा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले किनेको स्वीकार गरेका छन्। मन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चारमाध्यममा आए जसरी महासचिव पौडेलले कुनै अनियमितता नगरेको तर जग्गा किनेर पौडेल उल्टै ठगिएको दाबी गरे।
मन्त्रिपरिष्दको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘महासचिवज्यूले कसैको नाममा भएको जग्गा किन्‍नु भएको हो । तर जग्गा नक्कली परेछ । उहाँलाई कसैले ठगेछ।’
उनको प्रश्‍न थियो, जग्गा किनेर उहाँले के गल्ती गर्नु भयो त ? उहाँ त अपराधी होइन, पीडित हो । क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने होइन र ? उनले उक्त जग्गा मालपोतमा रोक्का भइसकेको जानकारी दिँदै छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताए। उनले भने, यसमा कुनै बद्‍मासी भएको छ भने कसैलाई पनि छोड्ने कुरा हुँदैन,
प्रश्न : यो छकि,
ठग्ने कोहो यो बारेमा मन्त्री बाँस्कोटाले केेेेहि खुलाएनन् किन ?